Imali yeshibhile eshibhe kunazo zonke ngo-2021. Uhlu lwemali engabizi kakhulu yedijithali namhlanje. Iyini imali eshibhile yedijithali?
Imali eyishumi ephansi eshibhe yedijithali ngokubiza kwentengo yesamba esisodwa se-digital ku-US dollar (USD) okwamanje.
Izindleko zedijithali ezishibhile kakhulu 21/10/2021
SHIBA INU (SHIB) 0.000029 $
eCash (XEC) 0.00019 $
WINkLink (WINKLINK) 0.00065 $
BitTorrent (BITTORRENT) 0.0036 $
Dent (DENT) 0.0058 $
Holo (HOT) 0.0092 $
VeThor Token (VTHO) 0.0094 $
Revain (REV) 0.018 $
Siacoin (SC) 0.018 $
Nervos Network (CKB) 0.019 $
I-idijithali yemali eshibhile kakhulu yinkonzo ye-intanethi yewebhusayithi ye-sptptoratesxe.com ekhombisa ama-izimali zeDividenti aphezulu ngenani eliphansi lezindleko zemali eyodwa ethengiswa ekushintshanisweni kwe-crypto.
Insiza ye-inthanethi ethi "eshibhile kakhulu eshibhile kakhulu" isebenzisa imithombo evulekile evela ekushintshanisweni kwe-cryptocur lwemali futhi ihlanganise isilinganiso se-crypto eshibhile kakhulu ngesikhathi sangempela.
I-idijithali yemali eshibhile noma ebizayo ibhekwa ngezindleko zohlamvu lwemali olulodwa. Kuyadingeka ukuhlukanisa inani lohlamvu lwemali kusuka ekuqongeleleni imali ye-idijithali yemali, isb. Inani eliphelele lawo wonke ama-izimali zeDividenti akhishwe yilo lwemali.
Ngokungafani nensizakalo ye- "Imali engabizi kakhulu yedijithali", ekhombisa intengo yohlamvu lwemali olulodwa, inani eliphelele noma okukhishwe kuzo zonke izinhlamvu zemali kuboniswa enye insiza yesiza, Ikhamera ye-izimali zeDividenti yemakethe .
Mhlawumbe i-idijithali yemali eshibhile ngentengo yezinhlamvu zemali ingaba yikhulu impela maqondana capitalization.
Uhlu lwama-cryptocurrensets angabizi kakhulu luhlala lushintsha, ngoba ukuhweba nge-crypto kuyaqhubeka futhi izinga lokushintshana le-idijithali yemali liyanda noma liyancipha.
Sebenzisa insiza "eshibhile kakhulu ye-crypto" online futhi mahhala.
Phezulu kwama-cryptocurrensets ashibhile namuhla 21/10/2021 imelelwa ukukhethwa kwama-cryptos ayi-10 ngokulandelana kokuhlela kusuka kokushibhile kuya kwabiza kakhulu, ukuze kube nezindleko ezikhulayo.
Ukushibhile noma izindleko eziphakeme ze-crypto kwethulwa ngamadola kalula ukuqhathanisa.
Isilinganiso samanani ashibhile kakhulu we-cryptocurrensets sivezwa ku- $date, kepha isilinganiso sibhekwa njalo.
Vele, kusasa kuzovezwa imali ephezulu yamanani ashibhile kakhulu wekusasa.
Vakashela iwebhusayithi yethu futhi usebenzise insiza yama-izimali zeDividenti ashibhile kakhulu anamuhla.
Imali engabizi kakhulu yedijithali 2021
I-idijithali yemali engabizi kakhulu ye- 2021 inkonzo yethu yasendaweni yamahhala ye-inthanethi ekhombisa ama-izimali zeDividenti ashibhile e- 2021.
Isampula ye-crypto engabizi kakhulu ingena ku- 2021, kepha sihlola izinyanga ezi-3 zokugcina zesilinganiso sokushintshana. Intengo namandla wereyithi ayaguquka nsuku zonke futhi ngenxa yalokho isilinganiso sethu esiphezulu "Ikhamera ye-izimali zeDividenti yemakethe 2021" ingashintsha nsuku zonke.
Ama-Izimali zeDividenti ngezindleko eziphansi.
Ama-izimali zeDividenti asezingeni eliphansi - isilinganiso sethu semali ye-idijithali yemali. Uhlamvu lwemali luyinto evamile yokubala. Kuyacaca ukuthi kungenzeka ukubala kokubili ukwabiwa kwezinhlamvu zemali nanoma iyiphi inombolo yezinhlamvu zemali kuze kube yilapho inani elifunayo selisethiwe.
Ngakho-ke, ukukalwa kwama-izimali zeDividenti ngenani eliphansi kunemibandela ethile.
Ithebula lama-izimali zeDividenti ashibhile.
Ithebula le-eshibhile yamanani ashibhile - kuboniswa ngokulinganisa isilinganiso sethu esiphezulu se-crypto eshibhile kakhulu.
Etafuleni le-crypto eshibhile ungabona igama le-idijithali yemali kanye nezinga lokushintshwa kwalo ngamadola aseMelika.
Uma uqhafaza kwenye yamanani ama-cryptocurrens ashibhile kakhulu etafuleni, uzoya ekhasini lemininingwane elinemininingwane ngesilinganiso sale mali ye-crypto.
Ishadi lama-cryptocurrensets ashibhile.
Ishadi elishibhe kakhulu le-cryptocur lwemali kungenye ithuluzi lamahhala elise-inthanethi elibonisa amazinga aphezulu ama-izimali zeDividenti ashibhile kakhulu.
Ishadi elishibhe kakhulu le-idijithali yemali libonisa amanani aphezulu we-10 wemali ephansi.